Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 5 - Blockchain News
Batanidzwa kumahombekombe wokutengesera
Marginal zvokutengeserana ndechimwe chezvinhu purofiti, asi panguva imwe chete chinonyanya ngozi nzira crypto vatengesi. Zano iri rakakodzera chete nevatambi ruzivo vari vakagadzirira varege makuru zvemari nezvinhu.
In kumahombekombe wokutengesera, mumwe cryptotrader anotora chikwereti kubva bhuroka, uyo chiso Exchange zvinokonzerwa chikwereti, nokupa chitsama koratararo – kumahombekombe. Panguva imwe, mubereko akapiwa kushandisa chikwereti. saka, mumwe cryptotrader anogona mari ari cryptocurrency zvinopfuura pachiyero.
Pane huru dzakasiyana mbiri kumucheto wokutengesera: chinhu refu nechinzvimbo, kana mutambo nokumutsa, kana muzvinashawo rinoisa yokuti crypto twa pachamera mutengo, uye pfupi nechinzvimbo, kana mutambo kuti kuwa, kana mwero anoenda chokwadi kuti mutengo cryptocurrency kuchaita dzikira. zvisinei, kana mutengo crypto twa zvakakomba anoburukira apo vanotengesa kuwedzera, zvino kana zvasvika imwe inokosha, ari muzvinashawo anogona kurasikirwa zvose mubhangi yake yakafanira kumahombekombe runhare – kumanikidzwa Kuvharwa kubudikidza bhuroka of kutengeserana, kana muzvinashawo asina akawedzera mari nhoroondo. Kana akakwereta mari vari mungozi, exchange anekodzero bvisa kurasikirwa kubva dhipoziti pamusoro muzvinashawo wacho kumahombekombe nhoroondo.
Pane zviitiko apo vatengesi, uyo kokutanga aifanira kutarisana zvakakomba nezvinhu, sarudza kurera prices uye kuhwina shure nzvimbo dzavo pane kubvuma kurasikirwa. Izvo zvinowanzoita kuti kunyange zvikuru kurasikirwa.
Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 4 Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 1
Vanozvidzora maonero Crypto-Currency musika
The January dhirika ...
Previous Post:Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 4
Next Post:New Zvivako muQuebec anotanga Bitcoin migodhi akavhiyiwa
Chivabvu 21, 2018 pa 2:22 AM
Chivabvu 29, 2018 pa 2:15 AM
Chivabvu 30, 2018 pa 6:11 PM
Chikumi 3, 2018 pa 2:08 AM
Chikumi 4, 2018 pa 8:29 PM